WordPress: कसरी बच्चा पृष्ठहरू सूचीबद्ध गर्ने (मेरो नयाँ प्लगइन) | Martech Zone
शुक्रबार, जुलाई 13, 2018 शुक्रबार, जुलाई 13, 2018 Douglas Karr
हामीले हाम्रा धेरै WordPress क्लाइन्टहरूको लागि साइटहरूको हाइरार्की पुनर्निर्माण गरेका छौं, र हामीले गर्न खोज्नु भएको एउटा कुरा भनेको सूचनाको प्रभावकारी ढ .्गले आयोजन गर्नु। यो गर्नका लागि हामी प्रायः एउटा मास्टर पृष्ठ सिर्जना गर्न चाहान्छौं र मेनू समावेश गर्दछ जुन स्वचालित रूपमा तल सबै पृष्ठहरू सूचीबद्ध गर्दछ। बच्चा पृष्ठ, वा उप पृष्ठहरूको एक सूची। दुर्भाग्यवश, WordPress मा यो गर्न कुनै अन्तर्निहित समारोह वा सुविधा छैन, त्यसैले हामी एक विकसित वर्डप्रेस सूची उप पृष्ठहरू शोर्टकोड ग्राहकको थिमको फंक्शन.पीपीपी फाइलमा थप्न।
उपयोग धेरै सरल छ:
बच्चा पृष्ठहरू छैनन्
अक्लास - यदि तपाईं आफ्नो अनअर्डर गरिएको सूचीमा कक्षा लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यदि मुक्त - यदि बाल बच्चा पृष्ठ छैन, तपाईं पाठ घुसाउन सक्नुहुन्छ। यो काममा आउँदछ यदि यो कामको सुरुवातको सूची हो ... तपाईं प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ "कुनै हालको उद्घाटनहरू।"
सामग्री - यो सामग्री हो जुन अनअर्डर गरिएको सूची भन्दा पहिले प्रदर्शित हुन्छ।
थप रूपमा, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने छोटो अंश प्रत्येक पृष्ठको वर्णन गर्दै, प्लगइनले पृष्ठहरूमा अंशहरू सक्षम गर्दछ ताकि तपाईं पृष्ठको सेटि onहरूमा त्यस सामग्रीलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ।
म अन्ततः कोड स्थापना गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो बनाउन को लागी एक प्लगइन मा धक्का को लागी र, र बाल पृष्ठ शर्टकोड प्लगइन सूची आज WordPress द्वारा अनुमोदन गरिएको थियो! कृपया यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र स्थापना गर्नुहोस् - यदि तपाईंलाई एक समीक्षा प्रदान गर्न मनपर्‍यो भने!
टैग: बच्चा पृष्ठहरू सूचीबद्ध गर्नुहोस्सूची उपपृष्ठहरूजोड्नुछोटा कोडहरूWordPressWordPress प्लगइन